Daraasad: Faa’iidooyin caafimaad oo yaab leh oo kujira kaarooga ama(carrot)ka - Horn Future
Daraasad: Faa’iidooyin caafimaad oo yaab leh oo kujira kaarooga ama(carrot)ka
Daraasad cusub oo la soo saaray ayaa muujisay joogtaynta cunitaanka geedka karooga ama (carrot)ka ay yarayso halista kansarka sanbabada, kansarka naasaha iyo kansarka mindhicirka 33% ugu yaraan.
Habada faa’iidooyinka geedkan kaarooga daraasadani ay ku sheegtay waa kuwan soo socda:
Waxa uu leeyahay awood weyn: Karoogu waxa uu leeyahay awood gaar ah oo uu ka horataggo bakteeriyada cudurada, sidaa daraadeed karooga oo la googooyo ama ridqo/shiido oo biyo lagu kariyo waxa loo isticmaala boogaha si looga hortaggo cudurada iyo bararka.
Waxa uu ka hortaga cudurka wadnaha: Daraasadu waxa soo jeedinaysaa ama tilmaamaysaa in cuntooyinka ay ku badan tahay maadooyinka ( carotenoids) sida karooga, basbaaska macaan uu xidhiidh ka dhaxeeyo hoos dhaca cudurada wadnaha.Geedka Kaarooga ma’ aha oo kaliya in ay ku jirto maadada( beta carotene), laakiinse waxa sidoo kale ku jirta maadadooyinka ( Alfa-carotene iyo lutein),iyada oo isticmaalka joogtada ah ee Kaaroogu sidoo kale uu yareeyo heerka (Cholesterol) ama baruurta ku jirta dhiigga.
Waxa uu ka hortagga gabowga:Maadada heerka sare ah (beta-carotene) ee ku jirta geedka Kaarooga waxa ay ka dhigaysaa in(antioxidant)ku si xoog leh u shaqeeyo taas oo ka hortaggaysa dhaawaca soo gaadhaya unugyada jidhka ,sababo la xidhiidha natiijooyinka qaybaha xorta ah ee ee sameeysmaysa inta lagu guda jiro dheef-riddiqa caadiga ah,sidaas daraadeed Kaarrot ku waxa uu ka caawiyaa yaraynta unugyada gabowga.
Waxa uu ilaaliyaa caafimaadka ilkaha iyo ciridka:Cunitaanka karoogu waxa uu ka shaqeeyaa nadiifinta ilkaha isagoo ka saaraya madowga iyo huurada ilkaha,waxana uu soo saaraa dheecaanka candhuufta ee ka shaqeeya baa’bi’inta bakteeriyada.
Waxa uu jidhka ka nadiifiya sunta: Maadada( Vitamin A) waxa ay ka caawisaa beerka in uu ka saaro sunta jidhka,iyada oo sido kale karooga ay ku jirto maadada(fiber)ka ee iyadu ka shaqaysa fududeeynta dheef-riddiqa taas oo ka caawisa nadiifinta mindhiqiraha iyo dardar galinta dhaqdhaqaaqa qashinka
« Turkey oo u yeedhay qunsulka Swiss kadib dibadbax ka dhacay dalkan oo ku baaqay in la dilo Erdogan	» Midowga Yurub oo ku taliyay in la joojiyo dawo ay tijaabisay shirkad laga leeyahay India